Daad Company News Shirkado iyo Soo-saareyaasha | DONGFANG tolida
Run ahaantii waa mid ka mid ah waxyaabaha ahaan ah oo aad danaynayso, fadlan nala soo socodsii. Waxaan ku faraxsanahay inaan idin siiyo oraah Marka la helo caddaymaha faahfaahsan oo ka mid ah noqon doona. Waxaan dhahnaa our R & D enginners takhasuska gaarka ah si ay kulmaan mid ka mid ah requriements ah, Waxaan rajeyneynaa in ugu dhakhsaha badan qaata Weydiimaha iyo rajeynayaa in ay leeyihiin fursad ay ku wada kaala shaqayn gudaha mustaqbalka. Ku soo dhawow eegno ururkayaga.
Marka Waxaa soo saaray, taas oo ka dhigaysa isticmaalka habka dunida ee ugu weyn ee howlgalka lagu kalsoonaan karo, qiimaha a failure yar yahay, waxaa haboon Jeddah dukaameeysatada doorashada. Our ganacsi. s sugan gudaha magaalooyinka ilbaxnimada qaranka, gaadiidka website waa mid aad u kaaftoomi-free, xaaladaha juquraafi iyo dhaqaale u gaar ah. Waxaan ku eryan ah "dad-dhisan, wax soo saarka la dhaafin, Maskax, ka dhigi cajiib ah" falsafada shirkadda. Maamulka tayo fiican leh adag, adeega fantastic, kharashka la awoodi karo in Jeddah waa taagan agagaarka weeyn ee tartamaya. Haddii loo baahdo, ku soo dhaweyn si ay u sameeyaan xiriir nala by page our web ama tashiga telefoonka, waxaan noqon doonaa ugu faraxsanahay in aan kuu adeegaynaa.
Item Tageen hab shahaado aqoon heer qaran iyo si wanaagsan usoo dhoweeyeen in industry our ugu weyn. Our kooxda injineernimada khabiir inta badan diyaar u ah inay aad u adeegtaan tashiga iyo warcelin noqon doonaa. Waan awoodnaa in aan sidoo kale aad samatabbixin la baarka kharash-la'aanta si ay ula kulmaan sooca ah aad. Dadaalka fiican u badan tahay in lagu soo saari doonaa si ay kuu siiyaan adeegga ugu faa'iido badan iyo xalal. Hadii aad danaynaysid in our shirkadda iyo xalalka, fadlan la xiriir nala by emails noogu soo diraya ama si toos ah noogu yeedhi. Si aad u noqoto in la ogaado xal iyo ganacsiga our awoodaan. ar dheeraad ah, aad u yeelan doontaa in ay yimaadaan our warshad inay arkaan awoodaan. Waxaan si joogto ah u soo dhaweyn doonaa guests ka adduunka oo dhan in our adag. o dhiso shirkad ganacsi. elations nala. Fadlan gabi ahaanba si xor ah u hadli noo ururka. nd waxaan rumaysan nahay ee aan wadaagno doonaa ganacsiga waayo-aragnimo ugu fiican ee la taaban karo oo baayacmushtariyadii oo dhammuba aannu marno.
Waxaan qaadan qiyaas kharash kasta oo ay muhiimad gaaro qalabka ugu-to-date iyo habab. Xirxirida ee brand magacaabay waa feature a dheeraad ah soocayaa. Alaabta si loo hubiyo sano adeegga dhibaato-free ayaa soo jiitay ah macaamiisha heshiis weyn. Xal waa la heli karo in naqshado fiicnaaday iyo Kumaan doonee, kolkaasay iyagu abuurmaan tahay si cilmiyeysan oo sahay Gaarna ceeriin. Waxaa fudud looga heli karaa noocyo kala duwan oo qaabka iyo sumadaha ay aad doorashada. Noocyada ugu dambeeyey waa wax weyn ka khayr badan la soo dhaafay ka mid ah si gaar ah oo ay ku caan yihiin badan rajada.
In xalka top of our warshad, taxane xal our loo tijaabiyey kuna naga badisay caddeyn awood khibrad leh. Waayo-beegyada uu dheeraad ah iyo faahfaahinta liiska item, fadlan riix badhanka si ay u bartaan Xogwarran dheeraad ah.
waqti Post: Oct-17-2018
funaanad -Knit dhogorta , jaakada funaanad xidhantay dhogorta , jilicsan Shell Iyadoo jaakada Sherpa dhogorta , jaakada funaanad dhogorta , dhogorta Winter Softshell jaakada , Funaanadaha Ragga dhogorta ,